DEG DEG: Hoobiyeyaal lagu garaacay Stadium Muqdisho oo ay ka socotay cayaartii lagu furay - Idman news
DEG DEG: Hoobiyeyaal lagu garaacay Stadium Muqdisho oo ay ka socotay cayaartii lagu furay
Muqdisho (Caasimada Online)-Wararka aan ka heleyno garoonka kumadda cagta ee Stadium Muqdisho waxa ay sheegayaan in hada ay ku bilaawdeen hoobiyeyaal, iyadoo ay ka socoto cayaartii ugu horeysay oo lagu furay gabal dhicii galabta.
Wararku waxa ay sheegayaan in dhowr madfac ay ku soo dhaceen garoonka iyo xaafadaha ku teedsan, welina lama oga khasaaraha ka dhashay, waxayna cabsi badan soo jawahday dadkii ku sugnaa garoonka oo cayaarta daawanayey, kuwaas oo isugu jira masuuliyiin iyo dad shacab ah oo cayaarta u daawasho tegay.
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa galabta xarigga ka jaray garoonka Stadium Muqdisho, kadib markii lasoo gebagebeeyey dib u dayactir lagu sameeyay, maadaama garoonku ka mid ahaa goobihii danta guud ee burburka baahsan uu ka soo gaaray dagaaladii sokeeye ee dalka ka dhacay.
Dad ku sugan garoonka ayaa Caasimada Online u sheegay in intii ay socotay cayaartu ay garoonka ku soo bilaawdeen hoobiyeyaal, aan la garaneyn jihada ay kasoo dhacayaan.
Hoos ka Daawo muuqaal kooban oo la duubay xilliga ay soo dhacayeen hoobiyeyaasha.
Previous Madaxweyne Farmaajo Ayaa Xariga Ka Jaray Muqdisho Stadium Oo La Dayactiray
Next DAAWO:- Somaliland Oo Fasaxday Gaadiid Horay Loola Wareegay Oo Qaad Lagu Qabtay